नेपाल आज | काठमाडौंको मेयरमा गगन थापासँग भिड्न मन छ (भिडियो)
Breaking News भिडियो
आइतबार, २७ चैत २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
केशब स्थापित, पूर्व मेयर काठमाडौं महानगरपालिका
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ । तपाईको नाम पनि काठमाडौंको मेयरका रुपमा चर्चामा छ । तपाईको आफ्नो तयारी चाहिँ कस्तो छ ?
मेरो तयारी भन्दा पनि, मैले यसबारे पार्टी अध्यक्षसँग दुई तीन चरणमा कुराकानी गरेको छु । उहाँले जो आए पनि काठमाडौं जित्ने उम्मेदवार हुनु पर्छ भन्नु भएको छ । जसरी भए पनि काठमाडौं जित्ने मेयर उम्मेदवार चाहिएको छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग पनि कुरा गरे । उहाँहरु सबैको भनाइ के छ भने जित्नु पर्छ । जित्ने उम्मेदवार जो भए पनि हुन्छ भन्ने छ । मैले पार्टीका लागि गरेको योगदान, मेरो विकासको भिजन, जनताको सेवा आदिलाई हेर्दा चुनाव जित्ने उम्मेदवार त मै हो । काठमाडौंमा धुलो धुवाबाट पीडित, सार्वजनिक बसमा सास्ती खेप्ने, दमकल एम्बुलेन्सको सुविधा नपाएका लाखौ मानिसहरुलाई यस्ता समस्याबाट पार लगाउने व्यक्ति केशब स्थापित हो भन्ने विश्वास छ । कतिसम्म भने अरु पार्टीका नेताहरुको पनि नाम त आएको छ । तर हेर्नुहोस् त कति पत्रकार साथीहरु म कहाँ आइसक्नु भयो । खै त अरुकोमा गएको ? यसले पनि ममाथिको विश्वास र भरोसा प्रकट गर्दैन र ?
मानौं, तपाईलाई पार्टीले टिकट दियो, अब तपाईका योजनाहरु के के हुनेछन ?
मेरो योजना भनेको पार्टीको पक्ष पोषण गर्ने हो । कहि राजनीति छ, कतै अराजनीति छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन भनेको दुई तीन लाख सचेत मतदाताहरुको छनोट हो । त्यो छनोटमा एमालेको पक्षमा उभार ल्याउन सकियो भने ठूलो कुरा हो । काठमाडौं महानगरको बजेट कम्तिमा ३० अर्ब हुन्छ । काठमाडौंको यो सानो भूगोलमा त्यो कहाँ खर्च गर्ने त ? यसकारण क्षेत्र विस्तार गर्नु पर्छ । मानौं लुभुसम्म मोनो रेल लैजाने रे । अब लुभुको विकास नगरी मोनोरेल लुभु पुग्छ त ।
अवश्य पुग्दैन । ५ सय नगर बस सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, भक्तपुर ललितपुर भएर नै चल्ने हो । त्यसकारण त्यहाँका बाटाघाटा पनि बन्नु पर्छ । यसकारण काठमाडौं वरपरका नगरपालिकाहरुलाई पनि मेरो उम्मेदवारी वा एमालेको विजयले सहयोग पुर्याउँछ । उपत्यका जित्नु भनेको ठूलो विजय हो । तिव्र गतिको विकास गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ । उपत्यका कब्जा गर्ने, तिव्र विकास गर्ने र मेची महाकालीमा एमालेको उभार ल्याउने योजना छ । यसो गर्ने बित्तिकै ५–६ महिनामै विकासको यस्तो लहर ल्याइदिने कि केन्द्रको निर्वाचनमा एमालेले पुरै कब्जा गरिदिने योजना हो मेरो ।
कसैको पनि बहुमत नभएको ‘हङ’ पार्लियमेन्टले दुःख दियो । महान जनयुद्ध गर्ने महान नेता प्रचण्ड हुन भनेको हैन ? निर्णय क्षमतामा हेर्नुस त कसरी फुस्स भएका । यसकारण एमालेले नै बहुमत ल्याउनका लागि अब मेचीकाली उभार आवश्यक छ ।
कुनै बेला काठमाडौंलाई मात्रै राज्यले महत्व दिएको अरु क्षेत्रलाई वेवास्ता नगरेको गुनासो थियो । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रको विकासका लागि एमालेले कार्यक्रम ल्यायो, त्यो कार्यक्रम बुझाउनकालागि मेची महाकाली अभियान थाल्यो । त्यो सन्देश फैलिन्छ कि ? जनताले थाहा पाउँछन कि भनेर त मेची महाकालीमा अवरोध भएको हो । जुन दिन त्यो सत्य मधेसका जनताले थाहा पाउँछन् अहिलेका यी नेताहरु त समाप्त हुन्छन् ।
काठमाडौंको मेयरमा मैले जित्ने सम्भावना धेरै छ । तर अर्को कुनै जित्ने पात्र अगाडि आएमा मैले त्यो पात्रलाई जिताउन ज्यान फालेर लाग्ने हो । मूल कुरा जसरी पनि एमालेले काठमाडौंको मेयर जित्ने हो ।
एमालेलाई जिताउने बाहेक अरु विकासका योजना के के छन् ?
त्यो त छ । तर मैले देखेको के भने नी यदि मलाई मेयरको उम्मेदवार बनाइयो भने उपमेयर जननेता मदन भण्डारीको छोरीलाई बनाउनु पर्छ । त्यो भयो भने समावेशी पनि हुन्छ । म बुद्ध धर्म मान्ने, उनी हिन्दु धर्म मान्ने । म नेवार उनी ब्राम्हण, म पुरुष उनी महिला । हामी दुईलाई अगाडि सार्ने हो भने अरु कोही अगाडि आउनै सक्दैन । उता गगन थापाको हेर्नुस त । मन्त्री छाडेर काठमाडौंको मेयरमा आउछु भनेका छन् । भएको मन्त्री छाडेर उनी मेयरमा निर्वाचन लडन आउलान त ? यता हारे भने त राजनीति सकिएन ? हाम्रो प्रतिस्पर्धी भनेको कांग्रेस नै हो ।
हाम्रो उम्मेदवार बलियो भए पछि उनीहरुको उठ्ने आँट नै आउँदैन । अर्को कुरा हाम्रो नेपालको आम संस्कार भनेको जित्नेलाई भोट हाल्ने हो । यसकारण हामी जित्छौं भन्ने भए पछि जनताले मत दिन्छन् । हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार घोषणा भए पछि समाजका सबै तह र तप्का, क्षेत्र, पेशा व्यवसायका मानिसहरुलाई हामीलाई अग्रिम बधाई भन्छन् । सबै प्रिन्ट मिडियामा अग्रिम बधाई भनेर छापिएपछि सकिएन ? अनि सोच्नुस त पार्टीको हाइट कहाँ पुग्छ ?
मुख्य रुपमा योजनामा केन्द्रीत बनौं न ।
मैले चुनाव जिते भने म सँग एक एक मिटरको योजना छ । युवा, वृद्ध, गरिब, दलित, व्यापारी, विद्यार्थी सबैका लागि मसँग योजना छ । काठमाडौंमा एउटा राम्रो पार्क छैन, कुरा गर्ने ठाउँ छैन । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय छैन । समस्यै समस्या छ । यी सबै समस्या समाधान गर्ने म सँग योजना छ । उदाहरणका लागि भदगोल कारागार सहरको बीचमा छ । कैदीबन्दीहरु सहरको बीचमा बस्छन् । त्यो जेल अब नुवाकोट सर्दैछ । त्रिपुरेश्वरको उचाईमा रहेको त्यो ठाउँ अब खाली हुँदैछ । त्यो ठाउँको दुई तीन तल्ला भूमिगत कार पार्क बनाउन सक्छौं । त्यो भन्दा माथि दुई तल्ला सपिङ कम्प्लेक्स खोल्ने । त्यो क्षेत्रको क्षेत्रफल भनेको ४० रोपनी हो । ४० रोपनीको दुई तल्लामा सपिङ कम्प्लेक्स भनेको ४–५ वटा विशाल बजार जत्रो हो । त्यसबाट राम्रो आय गर्न सकिन्छ । त्यसपछिको माथिल्लो तल्लामा पत्रकारहरुका लागि रिपोर्टर्स लन्ज बनाउने हो ।
त्यहाँ नुहाउने, बस्ने खाने सबै सस्ता दरमा सुविधा हुन्छ । त्यसको माथि क्रिकेट स्टेडियम खोल्ने हो । त्यसमा भारत र पाकिस्तानको एक टेस्ट म्याचको एक खेल गर्न सकियो भने ५० हजार मान्छे यहाँ आउँछन् । होटल सबै भरिन्छन् । एक दुई जहाज खरिदको के चर्चा गरिरहनु । डाइरेक्ट २० वटा जहाज किन्ने हो । त्यसबाट कति धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । विभिन्न खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय टुनामेन्ट आयोजना गरेर ४० लाख पर्यटक ल्याइदिन्छु । यो त दुई चार टिप्स मात्रै हो । यस्ता त कति छन् कति छन् । मैले चालीस वटा जति क्षेत्र चिन्ह लगाएको छु । चालीस भनेको चाहिँ जमिन हो । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी निजी छ । त्यो निजीलाई पनि अधिग्रहण गर्ने हो । अधिग्रहण गर्दा चलेको दरको २० प्रतिशत बढीमा किन्ने भनेको हो । यसो गरेपछि कोही पनि बेखुसी हुँदैन । ती क्षेत्रमा म सपिङ कम्प्लेक्स देखि विभिन्न योजनाहरु लागू गर्छु । त्यसबाट जग्गा बेच्ने पनि अंशियार भएर लाभ लिन सक्छ ।
यातायात सेवाको विकासको पनि गर्नु हुन्थ्यो नी ?
हो, सुरुवातमा ३ सय जति बस ल्याउने । त्यसपछि ५–७ सय ठूला बस ल्याउने । हरके १ –२ मिनेटमा बस प्राप्त हुनेछन् । जब २ मिनेटमा बस चढन पाइन्छ भने मान्छे किन कार लिएर हिँडछ ? बसमा चाहि अशक्त, वृद्ध, बालबालिका आदिमात्रै बस्ने हो । बाँकी सबैले उभिनु पर्छ । स्मार्ट कार्ड बोकेर यात्रा गरे अनुरुप पैसा तिर्दा भइहाल्छ ।
अब मैले जोड दिएको चाहि धुलोको विषय हो । मैले यसबारे प्रचण्डदेखि सबैलाई भनिसकेको छु । धुलो तह लगाउने प्रविधि भनेका ओटासिल हो । धुलोलाई छानेर त्यसमा अलिकति सिमेन्ट मिसाउने हो । त्यसलाई धुलो उडने ठाउँमा लगेर जोडने हो भने यो धुलो तुरुन्तै बन्द हुन्छ । यसकालागि ४० करोड लाग्छ । धुलोले लाखौ मानिसको फोक्सो बिगारिरहेको छ । अमूल्य फोक्सो बिगार्ने धुलो तह लगाउन ४० करोड कुन ठूलो कुरा हो र ?
तपाईले युवाहरुलाई प्रेम गर्न पार्क बनाइदिन्छु भन्नु भएको थियो, त्यो कस्तो हुन्छ ?
त्यो भनेको एक अध्यात्मिक प्रेमको चर्चा हो । म ध्यानमा बस्दा मेरो शरिरको सानो सानो अंश महशुस गर्छु । त्यसलाई नियालेर हेर्दा कोष पाउँछु । कोषलाइ पनि नियालेर हेर्दा प्रकाश मात्रै देख्छु । अब कुनै पनि नयाँ ध्यानीलाई सुरुमै त्यस्तो ध्यानमा पुर्यायो भने त उसले आफ्नो शरिरको अस्तित्व नै देख्दैन । प्रकाश मात्रै देख्छ । ऊ त आत्तिन्छ । यसकारण मैले बनाउने प्रेम पार्क भनेको अध्यात्मिक हो । थानकोटयताको दहचोकदेखि नैकापसम्म छ सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा छ । त्यहाँ राम्रो पार्क बनाउने हो । त्यो क्षेत्रमा दैनिक लाखौ मानिस सफा ठाउँमा जाने हो । त्यहाँ लैजाने सजिलो, छिटो लैजाने तरिका मिलाउने हो । त्यहाँ पुगेपछि सबैले सबैसँग प्रेम गर्ने मिलाउने हो । यो नै पार्कमा प्रेम गर्ने गराउने योजना हो । यसमा जो कोही पनि अंशियार बन्न सक्छन् ।
तपाईका योजना अथाह हुन्छन्, कार्यान्वयनको पाटो चाहीँ शुन्य हुन्छ भन्छन् नी ?
मैले नै हो एमालेमा युवा सगठन खोलेको । त्यसबेला युवा संघको नाम प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ थियो । मदन भण्डारीलाई काठमाडौंबाट उठन लगाएको मैले नै हो । रत्नपार्क, माइतीघरको काम कसले गर्यो र ? मैले नै गरेको हो । माइतीघर मण्डला बनाउने तीन वर्ष लाग्छ भन्थे शेरबहादुर देउवाले । मैले १४ दिनमा बनाएँ ।
तपाई कहिले माओवादी, कहिले राजावादी, कहिले संघीय समाजवादी किन यस्तो अस्थीर ?
संसारमा सबै अस्थिर नै हुन्छन् । बामदेव गौतमजीले पार्टी नै विभाजन गर्नुभयो । म त पार्टी विभाजन गर्न त गइनँ । म राजनीतिबाट पलायन भएको छैन । मैले राजनीति गरि नै रहेको छु । एउटा कालखण्डमा त्रुटि गरेको हो । मैले यो राष्ट्रको हितबाहेक केही गरेको छैन । मलाई एमालेको अध्यक्षले बोलाउनु भयो म अहिले फेरि गएँ ।
मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु भयो भने कांग्रेसबाट कसलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्न चाहनु हुन्छ ?
गगन थापा आए ठीक हुन्छ । लुरेलाई त हराएर पनि के मेयर बन्नु । हुन त गगन थापाको राजनीति सक्ने कुरा मलाई थाहा छ । तर पनि म त्यस्तो कुरा चाहिँ भन्दिनँ । किनकी त्यस्तो भन्नु राम्रो पनि होइन राजनीतिमा । गगन थापाको दस्तावेज नै मसँग छ । तर म भन्दिनँ । तर यो चुनावी प्रतिस्र्धामा त्यो विषय उठाएर उहाँलाई ढाल्दिनँ । दर्शन, राजनीति, निर्माणकै कुरा गरेर ढाल्दिन्छु । उहाँको इश्यु म उठाउँदिन । अरुले उठाउन सक्छन् । राजनीतिक मान्छे हो म उठाउँदीन ।
ex mayor of kathmandu keshav shtapit mayor election
राजसंस्था पुनस्र्थापनाकाे माग गर्दै शिव सेना नेपाल द्वारा सुस्तामा राँके जुलुस प्रदर्शन